Ny vy vy lohataona karbaona 14 ″ dia manome tanjaka mahery. Ny tantana plastika goavambe dia mahazo aina rehefa mahazo mafy rehefa ampiasaina，afaka manampy anao hampiasa tsara kokoa eny ivelany.
Ny vokatray dia mety ho fanoherana ny harafesina maharitra indrindra sy faharetana avo lenta amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany, izahay no ho safidinao tsara indrindra.
zavatra BS512MHY Marika Gemlight na OEM / ODM
Blade Style Round angady Sekolin'ny angady 235 * 300 * 970mm
Halava tanteraka 970mm Blade Material Tavoahangy vy avo karbaona miaraka amin'ny Mn Enhanced / SAE1070
Fitsaboana hafanana matevina Famonoana sy famonoana Blade feno Hamafin'ny Blade HRC45-55
Tang feno ENY Volom-bolo Hamafin'ny optimum, fahalalahana ary fanoherana.
Blade Edge Type Voarara mialoha Fitsaboana ambonin'ny tany Mitifitra mifono / Mainty na namboarina
Fiarovana amin'ny lohany Miaraka amin'ny kitapo PVC Hatevin'ny lelam-bolo 1.4mm
Blade Detail Niorina ny fikolokoloana voalohany Angady sy tahony Fixed Type Rivet
Ny lanja tanteraka 1.5KG Mitantana fitaovana HAZO
Ny Gemlight Panga Machete dia ampiasaina any Karaiba sy Afrika matetika. Ny kibony lalina dia manome lanja amin'ny fikolokoloana sy ny curvature ho an'ny fikosehana. Ny teboka miakatra dia mety hampifantoka ny hery amin'ny faritra kely amin'ny fanorohana.
Satria ny vy vy karbaona mahery dia matanjaka kokoa noho ny vy vy tsy misy vy. Ary koa ity machete ity dia manome lelam-by vy izay mitazona ny hamafiny lava kokoa noho ny karazana maody hafa. Ny famonoana olona sy ny fanamainana izay mahatonga ny volo feno hihamafy sy hamafisana kokoa. Ary koa, ny elatra dia anti-harafesina ary arovana amin'ny fiarovana mazava amin'ny akanjo. Tsy maintsy ataonao maina rehefa avy ampiasaina tsara.